Fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny nono - Fitsaboana ny fivontosan'ny CA Protons
Home / kanseran'ny nono
Antony sy risika
Dingana & naoty
Fiarovana amin'ny kansera amin'ny Proton Therapy
Miady amin'ny kansera amin'ny alàlan'ny famaritana miaraka amin'ny laser
Ny teknolojia fanaraha-maso vatan-jaza pensilihazo an'i California Protons dia endrika marim-pototra amin'ny fikorontanan'ny taratra amin'ny homamiadana izay ahafahan'ny dokotera mikendry ny tendron'ny nono amin'ny alàlan'ny taratra avo lenta ao amin'ity faritra mahasarika ity.
Raha ampitahaina amin'ny fitsaboana proton passive-miparitaka taloha ho an'ny homamiadan'ny nono, ny teknôlôjian'ny fandinihana ny beam-bolo dia manafaka ny fitsaboana proton ho an'ny homamiadan'ny nono ao anatin'ny 2 milimetatra ary amin'ny fikarakarana fatratra. Manafika mametaka ny fivontosana izahay ary mampihena ny fihanaky ny vatan'ny taolana mahasalama. Zava-dehibe izany ho an'ireo marary homamiadan'ny nono izay mety miatrika ny fisian'ny kansera faharoa, ny ratra amin'ny havokavoka ary ireo trangan-javatra lehibe lehibe any aoriana any amin'ny fiainana noho ny fiparitahan'ny taratra teo aloha. Ny fampihenana ny poizina mifandraika amin'ny taratra dia mampitombo ihany koa ny fahafahan'ny marary mameno ny fitsaboana amin'ny fampiatoana na fanemorana kely kokoa.
Fitsaboana ny homamiadan'ny kansera
Ny antsipirian'ny fitsaboana
Ny homamiadana eo am-boalohany
Ny homamiadana eo an-toerana eo an-toerana (Stage II sy III)
Duktika carcinoma in-situ
Ny homamiadana mamerimberina
Alefaso ihany ny fivontosana
Arovy ny fonao, ny havokavoka ary ny tadim-bolo
Hikazona ny fiainanao tsara mandritra ny fitsaboana amin'ny homamiadan'ny nono
Mampihena ny voka-dratsin'ny fitsaboana amin'ny taratra, anisan'izany ny loza mety hitranga amin'ny aretim-po, ny homamiadan'ny havokavoka ary ny pnonezola
Mampihena ny loza mety hitranga amin'ny homamiadana faharoa noho ny taratra
Fitsapana ny fikarakarana drafitra fitsaboana ho an'ny vehivavy manana kansera amin'ny sisiny havia amin'ny fitsaboana fitsaboana aretin-kibo dia hita fa raha oharina amin'ny taratra X-ray, ny fitsaboana proton dia niteraka:
Ny fatran'ny taratra mihena amin'ny havokavoka1
Ny taratra efa nihena ho any amin'ny tratra hafa1
Ny fatran'ny taratra dia mihena ao am-po1
Soa azo avy amin'ny fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny nono
Ny teknolojia fanaraha-maso ny pensilihazo momba ny homamiadan'ny nono dia mifehy tsara ny proton hametraka ny tampon'ny Bragg - ny fotoana hametrahan'izy ireo ny heriny lehibe indrindra — ao amin'ny fivontosana. Io dia ahafahantsika mitsabo endrika fivontosana sarotra kokoa ary miovaova ny fatra ao anaty fivontosana.
Ny fitsaboana protonolika mandroso dia mamela ny dokotera amin'ny fomba voafantina tsara kokoa amin'ny taratra ambony amin'ny hozatry ny tratran'ny homamiadana sy ny hozatra, ary mampihena ny fatra amin'ny sela mahasalama ny taova mahasalama sy ireo sela mihintsy. Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia naseho mba hanomezana fitsaboana haingana kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza.
Hitan'ny fandinihana fa ny fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadan'ny nono dia manome fandrakofana tsara ny lymph nodes, raha toa kosa ka mampihena ny fatra mihena amin'ny ratra amin'ny fo sy ny havokavoka. Ity farany dia miteraka atahorana ny fisehoan'ny aretim-po, ny homamiadan'ny havokavoka ary ny pnonezolita.
Ny fitrandrahana tratra (PBI) miaraka amin'ny fitsaboana proton dia manome fizarana taratra taratra tsara kokoa ary mampihena ny fihenan'ny tavy, fo sy havokavoka mahasalama raha oharina amin'ny teknikan'ny PBI photon sy X-ray. Izy io koa dia mifandray amin'ny fihenan'ny poizina sy ny vokatra tsara indrindra.
Tsy toy ny teknolojia taloha, ny drafi-pitsaboana dia azo ampidirina ao anaty solosaina ary vita ao anatin'ny iray minitra. Ny fitsaboana ihany koa dia tsy misy dikany ary azo alain-tahaka ka ahafahan'ny marary miverina haingana kokoa amin'ny asany isan'andro.
Fiomanana amin'ny homamiadana
& Fitsaboana Proton
Miankina amin'ny ambaratongan'ny homamiadan'ny nono, ny fitsaboana mitambatra amin'ny mastectomy na ny fivontosana lumpectomy, mety hitranga amin'ny fivontosan'ny nono ny fitsaboana simika. Ny safidy fitsaboana koa dia voakasiky ny karazana homamiadan'ny nono, taona, ny fahasalamana ankapobeny ary ny tiana manokana.
Amin'izao fotoana izao, ny homamiadan'ny nono dia somary kely amin'izao vanim-potoana izao ary tsy miparitaka amin'ny lymph node mihitsy, na miparitaka amin'ny faritra kelikely ihany ao amin'ny nitaiza lymph sentinel. Raha ny fandidiana no fitsaboana mahazatra indrindra, ny fitsaboana ny tara-batana amin'ny homamiadan'ny nono homamiadana dia matetika no nasaina aorian'ny fandidiana hampihena ny mety hisehoan'ny homamiadana na miverina.
Ny kanseran'ny nono amin'ny ambaratonga II dia lehibe noho ny homamiadan'ny sehatra sy / na niparitaka tamin'ny lymph node vitsivitsy. Raha ny fandidiana dia ny fitsaboana mahazatra indrindra amin'ny homamiadan'ny nono II, ny fitsaboana amin'ny radiation dia matetika noentina aorian'ny fandidiana hampihena ny mety hisehoan'ny homamiadana na miverina.
Ny fivontosana amin'ny ambaratonga III dia lehibe noho ny 5 cm, na ny homamiadana dia mihalehibe amin'ny hoditra mony na hozatra hozatra na miparitaka any amin'ny lymph node manodidina. Raha ny fandidiana dia ny fitsaboana mahazatra indrindra amin'ny homamiadan'ny tratran'ny III, ny fitsaboana amin'ny taratra dia matetika no nasaina aorian'ny fandidiana ny homamiadan'ny nono amin'ny fampihenana ny mety hisehoan'ny homamiadana na miverina.
Amin'ity IV ity, ny homamiadan'ny nono dia niparitaka any an-tratran'ny tratra sy ny lymph akaiky any amin'ny faritra hafa amin'ny vatana. Ny fitsaboana zava-mahadomelina toy ny chimiothérapie sy / na fitsaboana hormonina no fitsaboana ilaina indrindra ho an'ny vehivavy manana homamiadan'ny stage IV. Amin'ity dingana ity, ny fitsaboana taratra proton dia mety ampiasaina hampihenana ny fivontosana na hitantana fanaintainana.
Ny fitsaboana proton dia matetika no fomba tsara indrindra hitsaboana azy fivontosana miverimberina amin'ireo faritra izay efa voatsabo tamin'ny fitsaboana fitsaboana taratra.
Mety ho sarotra ny mitsabo ireo faritra mampihetsi-po teo aloha. Ny tavy salama manodidina ny fivontosana miverimberina dia tsy "manadino" tanteraka ny fatra amin'ny tara-pahazavana teo aloha, ary ny fatra fanampiny dia mitohy mampitombo ny valan'ny ratra ara-dalàna. Ny fitsaboana ny vatan'i Proton dia mety ahafahan'ny dokotera mifantoka tsara amin'ny fatra amin'ny tanjona ary hametra izany any an-toeran-kafa, ka avelao ny fitsaboana indray miaraka amin'ny taratra amin'ny marary voafantina.
Vokatry ny fitsaboana amin'ny homamiadana
& Vokany maharitra
Ny fitsaboana fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny nono ao amin'ny California Protons cancer Therapy Centre any San Diego dia mety hanolotra valiny mitovy amin'ny taratra X-ray mahazatra, raha mampihena ny vokatra maharitra sy mety hanimba ny fiainana toy ny aretim-po vokatry ny fihenan'ny ratra amin'ny ratra. Izy io koa dia manome ny mety hisian'ny fihenan-drà mety ho an'ny homamiadana faharoa any aoriana any noho ny fihenan'ny tara-pahazavana amin'ny sela sy taova mahasalama manodidina anao.
Na izany aza, ny fitsaboana homamiadana rehetra dia manana tombony sy fatiantoka. Aza adino ny miresaka momba ny mety ho loza rehetra, ary koa ny safidy fitsaboana, miaraka amin'ny oncologist anao.
Te hanana fiainana lava aho ary tsy te hampidi-doza raha voan'ny aretim-po na fanimbazimb-po, noho izany dia nisafidy fitsaboana fitsaboana aho. Taorian'ny fifampiresahako tamin'i Dr. Chang dia fantatro fotsiny fa any California Protons no misy ny toerana tiako hahatongavana. Nandany fotoana be tamiko izy ary nahatoky tena tamin'ny fahaizany aho.
Ny marary kansera
Fikarohana fikarohana manohana ny fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadan'ny nono
1 Ny tranga fitsaboana ho an'ny fitsaboana proton beam
Afaka manatsara ny fiterahana hafanana amin'ny marary homamiadan'ny tratry ny homamiadana ve ny fitsaboana proton?
Fomba fiasa vaovao amin'ny fitsaboana radiation postmastectomy amin'ny alàlan'ny vatan-jaza proton voarindra
Radioterika Proton ho an'ny rindrin-tratrany sy taratra lymphatic régional; fampitahana fatra sy ny fanafody fitsaboana
Ny fitsipi-pifehezana UK momba ny fampiroboroboana ny vatan'ny vohoka (START) dia fanandramana amin'ny hypofractionation radioterale amin'ny fikarakarana ny homamiadana vao maraina: ny valin'ny fanarahana 10 taona amin'ny fitsapana roa voafehy roa
Ny hafanana sy ny poizina misy vahana dia avy amin'ny RAPID: fitsapana an-tsokosoko ny fanafainganana ny ampahany amin'ny nono amin'ny alàlan'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fitsaboana taratra miady antonony telo-dimensional
Ny fantsom-baravarana amin'ny tratrany nateraky ny andry proton: valin'ny fitsapana dingana II
Radiotherapy proton postoperative ho an'ny homamiadana eo an-toerana sy eo an-toerana: mety ho fanatsarana ara-pitsaboana mifanaraka
Fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadan'ny nono taorian'ny mastectomy: valin'ny fitsapana klinika mety hitranga
Atahorana ny aretim-po isemika ao amin'ny vehivavy taorian'ny radioteran'ny homamiadan'ny nono
Ny kansera matevina faharoa taorian'ny fitsaboana ny taratra: famerenana famotorana ny fandalinana ny epidemiologic momba ny fifandraisana-valin'ny valin'ny taratra
Momba ny fitsaboana fitsaboana Proton